Ukuqwalaselwa kwabathengi: Ukuthengisa kuthengisa okungakumbi kuneeVenkile kwiYelp | Martech Zone
Ukuqwalaselwa kwabathengi: Ukuthengisa kuyafumana uPhononongo olungakumbi kuneeVenkile zeYelp
NgoLwesibini, Januwari 31, 2017 NgoMgqibelo, Oktobha 20, 2018 UMiriam Ellis
Uyeva IngcebisoEzintathu, ucinga iihotele. Uyeva Ezempilo, ucinga oogqirha. Uyeva Yelp, kwaye amathuba alungile ukuba ucinga zokutyela. Yiyo kanye le nto kusothusa abanini bamashishini abaninzi kunye nabathengisi ukuba bafunde Ubalo lukaYelp Ithi, kwizigidi ezili-115 zokuphononongwa kwabathengi i-Yelpers ishiye ukusungulwa, I-22% inxulumene nokuthenga vs. I-18% inxulumene neeresityu. Igama lokuthengisa, ke, lenza owona mxholo uphambili womxholo weYelp, umqondiso kumashishini ezitena kunye nodaka ogcina ubukho beYelp obusebenzayo yimfuno yentengiso yendawo.
Umzekelo wehlabathi lokwenyani: jonga iivenkile eziphezulu zokuphucula ikhaya kwiYelp kwindawo yeSan Francisco Bay. Inani eliqinisekileyo lokuphononongwa kwezinye iindawo azifumeneyo liyamangalisa. Sibona iSaphulelo saBakhi beZaphulelo (250), uPhuculo lweKhaya laseLowe (427), iCole Hardware (297) kunye neCliff's Variety (461). Lo mxube weemveliso eziphambili kunye nabathengisi abazimeleyo babalaselisa iitotali zokuphonononga phantse naliphi na ishishini elinokuthanda ukufumana, ngaphandle kokuba linemvakalelo elungileyo.
Kodwa nantsi into ebanjiweyo: Izikhokelo zokuphononongwa kweYelp zezona zingqongqo kuhlolo lomthengi kwihlabathi, ukuthintela ngokukodwa iinkampani ekuceleni ngokuthe ngqo kubathengi ukuphononongwa. Ke ngoku ishishini lokuthengisa linokukhuphisana njani kwiYelp ngelixa lihambelana nesikhokelo? Nazi iingcebiso ezi-5 zokukunceda wenze kanye loo nto.
1. Kulumkele ukuchitha izixhobo
Kubalulekile ukuba uqonde ukuba ishishini lakho ligqibe ekubeni lingazihoyi izikhokelo zeYelp kwaye liqale ukucela bonke abathengi ukuba baphonononge iYelp, imbuyekezo yakho kutyalo-mali lomzamo isenokungabi naluncedo. Ukucela nabani na ukuba akuhlolisise ongekasekwa Yelper kunye noqikelelo oluncinci lwe-5 lokujonga kuya kukhokelela ekubeni ingxelo yabo icocwe. Kwaye, ipateni yeakhawunti entsha yomsebenzisi eshiya uphononongo lweshishini lakho inokuphakamisa iiflegi ezibomvu ngesigebenga esikhulu.
Ukuthathela ingqalelo oku engqondweni, kunye nokujonga oko I-Yelp ihlazisile esidlangalaleni abaphula umthetho Kwixa elidlulileyo, ukunqanda umthengi-ongenantsingiselo ukubuza uphononongo lweYelp kuya kukhusela izixhobo zakho (kwaye mhlawumbi negama lakho), zikukhulule ukuzama ezinye iindlela.
2. Wamkele ukugqwesa okugqithileyo
Uvavanyo lwabathengi oluqhutywa liqonga lolawulo lokujonga kwakhona i-GatherUp lufumene ngokupheleleyo Iipesenti ezingama-25 zohlolo zivela kumava akhethekileyo kubathengi. Eli nani libonisa ngokuqinileyo ukuba enye yeendlela ezilungileyo zokukhuthaza abasebenzisi baseYelp ukuba baphonononge ishishini lakho ngaphandle kokucelwa kukugqitha kulindelo lwabo ngexesha lenkonzo. Ukuba ufunda uphononongo lwee-brand ezithandwayo ze-Yelp, uya kufumanisa iziganeko zokupapashwa kwe-Yelpers ezibaphakamisileyo: unobhala owaphumela kwindawo yokupaka ukuya kuzisa into elityelweyo, umthengisi onikezela ngolwazi olunyanisekileyo endaweni yokuthengisa nzima, ishishini bayakuvuyela ukwenza iodolo kuyo nayiphi na into abangenayo isitokhwe.
Inokuba yinto elula njengentlonipho eyongeziweyo okanye emangalisa njengeyona nto iphambili 'wow' umthengi angayilindelanga eya kuthi iqhubele iYelp ukuba ichithe ixesha labo lasimahla ngokuzithandela ekwabelana ngolonwabo lwabo. Ukuba ishishini lakho lifuna uphononongo olungaphezulu lweYelp, phicotha imigaqo-nkqubo yeenkonzo zabathengi kunye neenkqubo ukubona ukuba ungaguqula ubuncinci bezenzo zibe yimpumelelo enkulu.
3. Yiba nguMalusi oNobuqili
'Ingqondo yomhlambi' ayisiyiyo inkcazo echukumisayo yokuphawula abathengi okanye ababuyekezi, kodwa ibikukuqwalaselwa okuqhelekileyo kwengqondo yabantu ukusukela kwinkulungwane ye-19 ukuba oontanga banempembelelo kwindlela yokuziphatha kwabantu. Enye indlela elula yokwenza iYelpers esekwe kukushiya uphononongo (ngaphandle kokucela) kukubabonisa ukuba abanye banako. Ezi ndlela zilandelayo zokwazisa ubukho bakho beYelp bezikho yamkelwe ngokucacileyo ngabo:
Khankanya olona vavanyo luhle lweYelp, ukuba nje ubuze imvume kubavavanyi ukuba benze njalo.
Qiniseka ukuba uyayisebenzisa Ilogo evunyiweyo yeYelp ngokwenza njalo, ngaphandle kokutshintsha okanye ukugqwetha.
Qiniseka ukuba ubeka uphononongo ku-Yelper oyibhalileyo, kwaye ungatshintshi ulwimi lwabo okanye inqanaba labo.
Ungasebenzisa kwakhona Iwijethi kaYelp ukufaka ngqo uphononongo kwiwebhusayithi yakho.
Ukuba ishishini lakho liyafaneleka, ungafumana 'Abantu Basithanda KwiYelp' ukubambelela.
Cela 'Sifumane Nge-Yelp'
Kuyafana nokusetyenziswa okuvunyiweyo kwiwebhusayithi yakho, unokubandakanya ukubonwa, ukuphononongwa okungafakwanga kweYelp kwizixhobo zoshicilelo zesiko. Umzekelo, unokufuna imvume ye-Yelper yokufaka uphononongo lwabo kwiivenkile ezisevenkileni, iibhanile, iincwadana ezinemifanekiso, iiflaya kunye nezinye iiasethi.
Zonke ezi ndlela zingasentla zifuna ukomeleza ulwazi lwabasebenzisi beYelp lokuba abanye baphonononga ishishini. Uyabathantamisa ngobunono kodwa ngobuchule ukuya kwinqanaba lokuguqula apho bathathe isigqibo sokutsiba kwi-bandwagon kwaye bongeze uhlolo lwabo.
4. Yenza i-Yelp incoko yeNdlela-ezimbini
Kungoyikeka ngokunyanisekileyo ukujongana nenyani yokuba umthengi woluntu unencoko eqhubekayo malunga nophawu lwakho kwiiplatifti eziphambili zokuphononongwa njengeYelp. Ukoyika uphononongo yinto yokwenene kunye esemthethweni yolawulo lwegama langoku, kodwa uxinzelelo (kunye neziphumo zeshishini) zinokutshintshwa ngokubonakalayo kukusetyenziswa kobuchule bempendulo yomnini umsebenzi kumaqonga amaninzi abonelelweyo. Eli nqaku lenza umnini ukuba aphendule kulo lonke uphononongo, kwaye kuninzi ebhaliweyo malunga namandla ale fomu yentengiso yokutshintsha ngokupheleleyo iimeko ezibi. Kuncinci okutshiweyo malunga neempendulo zomnini kuzo ezintle uphononongo ukubonisa umbulelo kunye nokukhuthaza ukuzibandakanya ngakumbi.
Ngenxa yokuba uphononongo oluqinisekileyo lweYelp ngabaxhasi bokuzithandela benza umxholo kwishishini lakho, ayilunganga kuphela ukubulela abavavanyi- ikwayindlela efanelekileyo yokubonisa kwabanye abantu baseYelpers ukuba unombulelo kangakanani kubaxhasi bakho. Umnini weshishini othatha ixesha ukubhala kancinci kodwa siko impendulo evakalisa umbulelo wokwenene ibonisa kubo bonke abanye abathengi abanokubakho ukuba ixesha labo kunye namagama amnandi aya kuxatyiswa. Umbulelo oqinisekileyo osuka kwishishini usebenza njengenkuthazo eyongeziweyo yokuyijonga kwakhona. Ngubani ongakuthandiyo ukuxabiswa?
Khumbula, kwakhona, ukuba i-elite Yelpers isebenza kakhulu kwi-Yelp-bayakonwabela kakhulu ukubhala apho. Bathumele umqondiso olungileyo, kunye nobukho bempendulo yomnini wakho osebenzayo, ukuba unomdla wokuzonwabisa weYelp ngokufanayo.
5. Yichaze ngomlomo, ngokokubona kwakho
Le ngcebiso ilungele amashishini amancinci asekhaya awakha ubudlelwane bokwenyani nabathengi bawo. Kwicandelo lokuthenga, oku kunokubandakanya iivenkile ezithengisa iincwadi, iivenkile ezithengisa iimpahla, iivenkile ezithengisa izipho, izitendi zasezifama, iivenkile ezizimeleyo okanye iivenkile zehardware, okanye amashishini abonelela abantu ababodwa njengabaculi, iimvumi okanye iimbaleki- ukubala nje ezimbalwa.
Ukuba wena, okanye inqanaba lakho eliphezulu, abasebenzi abathembekileyo bakhulise ubudlelwane kunye nabathengi abaqhelekileyo, akukho sizathu sokuba ungathethi nabo buqu malunga neYelp ngomzuzu ongakhawuleziyo. Ukuba ufumanisa ukuba yi-Yelper esebenzayo, akukho nto inokukuthintela ukuba uthethe malunga nokuba kunjani ukuba ngumnini weshishini ozama ukusebenza ngaphakathi kwezikhokelo zikaYelp zokungaze ubuze ngqo uphononongo. Inqaku loku ayikokusebenzisa iimvakalelo zabathengi-inqaku kukuba neencoko zendlela-mbini malunga nendima ebalulekileyo yesidima seshishini kuluntu enabelana ngalo. Ucinga ntoni umthengi wakho ngomgaqo-nkqubo? Ucinga ntoni ngayo? Ukuba umthengi uzinikele kwishishini lakho, incoko enje inokubakhuthaza ukuba benze eyabo indima yokugcina iminyango yakho ivulekile ukuze baqhubeke nokonwabela iminikelo yakho.
Umgaqo-nkqubo weYelp ubangelwa kukuzibophelela kwabo kubunyani. Bafuna uphononongo lungakhethi cala, ukuqinisekisa ukuba ziluncedo kubo bonke abathengi. Ngokuqinisekileyo oku kuyavakala- akukho mntu ufuna ukwenza uluvo olungeyonyani ngokusekwe kuvavanyo olungelulo okanye lokukhuthaza.
Abathengisi bendawo, okwangoku, bayazi ukuba kufuneka bakhuphisane ukuze baphile ngelixa bephila ngokwemilinganiselo yabo engundoqo yokunyaniseka nokulunga. Eli nqaku libonelele ngeengcebiso malunga nokufumana amandla amakhulu kuYelp ukuqhuba ingeniso ngendlela yenkampani yakho, ngaphandle kokusebenzisa gwenxa iqonga. Ngaphaya koku, kunyuke kuye kwi-Yelp, kubathengi ababasebenzelayo, nakumashishini athatha inxaxheba ukuze aqhubeke nokuphonononga ukuba yintoni eyenza umgaqo-nkqubo ulunge kubo bonke. Ukuthathela ingqalelo onke amaqela, yingxoxo efuna ukuqhubeka.
Andiqinisekanga ukuba kuthethwa ntoni malunga neshishini lakho kwiYelp kwasekuqaleni? Okanye ukhathazekile kwaye ungaqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi? Indawo yaseMoz kungekudala iza kuba nakho ukukunceda ubange kwaye ulawule ubukho beshishini lakho kwi-Yelp kwaye uphendule uphononongo kunye neempawu zolawulo lokukhangela lwasekhaya kwiqonga labo.
Qalisa ukulingwa kwakho simahla namhlanje!
tags: Iintlobo zeentabacole izixhobo zekhompyuthaabakhi bezaphuleloibhlog yobunjineliKhangela kuthi kwiYelpQokelelaUpGetFiveStarszempiloiingqondo zomhlambibasekuhlalenishishini lendawoukubonakala kwendawoInkqubo yokubonakala kwendawolowe'sUkuphuculwa kweKhaya likaLowemozmoz yendawozokutyelaReviewsesan FranciscoIngcebisoEzintathuukuqhubaYelpibhlog yelpUmgaqo-nkqubo we-yelpinkxaso ye-yelpIzikhokelo ze-yelpyelpers
Miriam Ellis Tuesday, January 31, 2017 Saturday, October 20, 2018
UMiriam Ellis yinxalenye ye- Indawo yaseMoz iqela. Xa engabhali incwadana yeendaba yanyanga zonke yeMoz kwaye ephendula imibuzo kwiforum ye-Q & A, unceda abathengi bakhe baqonde ubuchule be-SEO yaseKhaya kwinkampani yakhe Uyilo lweSolas Web.
Izizathu ezi-7 zokuba kutheni iiFomu zeKhokelo zifile
Feb 2, 2017 ngo-10: 16 PM
Inqaku elihle, kodwa ndinombuzo. Uthi:
“Gqabaza uphononongo lwakho oluhle lweYelp, ukuba nje ucele imvume kubavavanyi ukuba benze njalo.”
Kutheni ufuna imvume ukuba uphononongo luthunyelwe esidlangalaleni?
Feb 4, 2017 ngo-4: 26 PM
Enkosi ngokubuza umbuzo olungileyo. Yimfuneko kaYelp ukuba wenze oku, ngokwenqaku elinye endinxibelelanise nalo kwesi siqwenga. Uqikelelo lwam kukuba indlela uYelp abona ngayo kukuba umvavanyi uvumile ukuba amagama abo abhengezwe esidlangalaleni kwiYelp kunye namaqonga ahanjiswa nguYelp- abavumelanga ukuba amagama abo abhengezwe esidlangalaleni kwiwebhusayithi yenkampani yomntu wesithathu. Ke, ndigqitha nje kwiimfuno zikaYelp apha, kodwa njengoko benditshilo, ndicinga ukuba ngokuqinisekileyo sikhona isidingo sokuba iYelp iqhubeke nokuphonononga nabanini bamashishini ukuba yintoni eyenza umgaqo-nkqubo ulunge. Ndiyathemba ukuba oku kuyanceda!